Sina: Fanomezan-danja ny fitiavan-tanindrazana Han · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2009 3:57 GMT
Mbola voarara dia voarara tokoa ny miresaka ilay adim-poko ka tsy voaresaka mivantana loatra na an-tserasera na ivelan'ny serasera ny any Xinjiang. Raha halalinina ny fandikana ny herisetra eo amin'ny Oigoro sy ny Sinoa Han any Ürümqi ary raha jerena koa fa i Mongolia mpifanila vodirindrina aminy dia misy maha-neo-nazis azy, dia inona no tsoa-kevitra azo resahina tamin'ny herisetra avy amin'ny roa tonta?
Hu Ping tonian'ny Beijing Spring no namoaka tao amin'ny lahatsorany faramparany ho an'ny Radio Free Asia, raha mifandraika amin'ny politikan'ny governemanta eo an-toerana ny hatezeran'ny Oigoro, ka nitanisany ny antony maromaro manamarina izany, sady nampiasany ny fomba fiteny hoe fitiavan-tanindrazana Han. Toy izao no famaritana ny fitiavan- tanindrazana Han hita ao amin'ny Wikipedia:
“ilazàna ny hevitra manandratra ny fiaviany izay manome tombony ho an'ny Sinoa Han, vondrom-poko maro an'isa any Sina raha miohatra amin'ny vondrom-poko hafa vitsy an'isa, izay matetika dia aseho amin'ny fanamboniana kolontsaina. […] Fihoaram-pefy eo amin'ny Repoblika Entim-bahoakan'i Sina ny manao asa na miresaka izay manandratra foko sy foto-kevitra maneho fitiavan-tanindrazana Han (sy ny teny fankahalàna vitsy an'isa).”
Niteraka fanamarihana maro ny lahatsoratr'i Hu:
Sinoa Han ny tenako ary efa tany amin'ny faritra atsinanan'i Turkistan misy ny Oigoro aho. Marina avokoa ny zavatra rehetra voalazan'i Hu Ping. Henjana ny politikam-pitelemana ho Han amin'ny faritra maro, ary maro ny ao amin'ny foko Han no mifindra monina any, lasa voahilikilika tanteraka ny Oigoro.
Raha toy izay ny fijerinao azy, dia tsy toy ny tamin'i Amerika nitondra ny politikan'ny fampiasana ny teny Anglisy ve? Tsy mihevitra ve ianao fa tsy manana olana amin'izany koa ny olona miteny Indiana-Amerikana [sic] ? Tao anatin'ny Fandaharan'asan'ny antoko komionista sinoa, tsy ny foko vitsy an'isa ihany no tsy nanana zo ara-pivavahana fa ny avy amin'ny maro an'isa Han koa aza! Tsy noferana ny isan'ny zaza ateraky ny Oigoro, fa ny Han kosa dia voafehin'ny politikan'ny fanjakana amin'ny famerana ny zaza teraka! Amin'ny maha teraka Han sy nanalehibiazana ahy teto Sina, tsy mahita izany antsoina hoe fitiavan-tanindrazana mihoam-pampana Han izany izahay!
Ny fitelemana, ny fisisihana hiaraka amin'ny maro, maneho fivoarana eo amin'ny fiaraha-monina izany; tsy misy azo antenaina amin'ny fandàvana hiaraka amin'ny maro. Mihevitra ve ianao fa ny olona tsy mahay miteny Anglisy dia ho tafiditra anaty fiaraha-monina any Etazonia? Moa ve tsy lasa olona voahilika hafa koa any Etazonia i Chen Pokong?
Tsy tokony hisy faneriterena amin'ny fampiasan'ny Oigoro sy ny Tibetana ny teniny eo amin'ny taniny, sady io rahateo no teny fampiasan'ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny.
Tena zavatra tsy misy fotony! Na ny tompon-tany any Taiwan aza tsy maintsy miteny sy manoratra teny Sinoa!
O ry Hu Ping a! aza adinoina fa ny Han anie no tonga talohan'ny Oigoro tao Xinjiang e!
Mbola tsy tao Xinjiang aho, fa raha nody tany Hunan aho dia nianatra farafahakeliny tamin'ny tanàna roa, Yongzhou sy Changsha. Izao aho eto Shenzhen. Manan-jò kokoa ny Oigoro raha oharina aminay (Han): mahazo fikarakarana kokoa ry zareo amin'ny varotra, afaka mametraka vidin'entana lafo kokoa ry zareo, ary raha mijanona ianao mijery izay amidiny, dia tsy maintsy mividy, ary tsy misy zavatra hafa azonao atao ankoatra izany. Afaka midaroka anao ny polisy nefa tsy afaka manao na inona na inona amin'izy ireo, ary raha mandika lalàna izy ireo dia vetivety dia votsotra!
Tsy maintsy ampiasaina miaraka ny fikan'ny karaoty sy ny kibay rehefa miaraka amin'ny silamo, fa ankehitriny ny politikan'ny kibay aloha no mandeha. Mila mivoatra mihitsy aloha ny Silamo alohan'ny hisian'ny fihatsaran-javatra. Amin'izao fotoana zao aloha izy dia mbola fivavahana tsy manaja ny maha-olombelona.
Nahataka ny Oigoro, izay aloha ny zava-misy.
Io lahatsoratr'i Hu io dia navoaka ihany koa tao amin'ny UighurBiz, naorin'ilay mpahay toe-karena sy mpiserasera avy amin'ny foko Oigoro Ilham Tohti; Nigadra i Tohti ny volana Jolay ary navotsotra ny faran'ny volana Aogositra, ary niteraka resabe an-tserasera tato anatin'ny herinandro ny filazany ny fanohanany ny fomba fitondràna henjana ataon'ny mpitondra vaovaon'ny antoko ao Xinjiang, Zhu Hailun (manadaboka ny politikan'ny ‘tsy misambotra olona araka izay azo atao, mampihena ny famonoana, mamindra fo kokoa) manoloana heloka be vava. Ireto misy sombiny amin'ny fanamarihana voaray androany teo amin'ny vohikalan'ny UighurBiz :
“Mila foanana ny politikan'ny “Roa fihenana, iray famindram-po”
Naneho ny fanohanany ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny Antoko Ürümqi vaovao Zhu Hailun i Ilham ny amin'ny hanafoanana ny politikan'ny foko “Roa fihenana, iray famindram-po” (mihena ny fisamborana olona sy ny fampiharan-tsazy, mitombo ny famindram-po). Nahatsapa i Ilham fa tokony hitovy avokoa ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, raha lazaina fa nanararaotra io politika io ny avy amin'ny foko vitsy an'isa, nefa eo andanin'izany dia mampiteraka tsi-fahafaliana eo amin'ny Han izy io.
Izany ny olona; tsy nitaky ny fialàn'i Wang Lequan ny Han raha tsy efa nanomboka ren-dry zareo tsindron-tavim-panindronana (seraingy);tsy nitaky ny fanalàna ny ‘Roa fihenana, iray famindram-po’ ny Oigoro raha tsy nanomboka nahita fa tandindonin-doza ny fandriampahalemana. Mihevitra ve ianao fa mbola mety hiverina amin'ny heviny izy ireo?
Anisan'ny olom-bitsy Oigoro mba manao resaka misy heviny i Ilham, ary mahita mazava tsara ny fahasamihafana eo amin'ny fanjakana sy ny foko. Tsy mitovy amin'irony olona manana asa zara raha asa irony izay tsy mandray ny zavatra rehetra am-pahamatorana, manao ny Han [famaritana ara-toerana] ho tsy ara-dalàna, mandray azy ireo ho toy ny vazivazy. Faly afaka nianatra zavatra avy aminao.
Anisan'ny olom-bitsy Oigoro mba manao resaka misy heviny i Ilham
Ary mba firy moa ny Han tsy manavakavaka ny Oigoro?
Raha ny zava-misy, amin'ny toerana maro ao Xinjiang, tsy vitan'ny manavakavaka ny Oigoro fotsiny ny Han, fa tsy mandray azy ireo akory ho olombelona. Ohatra, enin-taona lasa izay, nanao afera tany Xinjiang aho. Nizotra ho any amin'ny làlan’ i Yan'an Nan any Ürümqi aho ary niezaka ny hahazo fiarakaretsaka, ary iny nisy tovovavy Oigoro iray nanatona ary niezaka ny hahazo fiara karetsaka ihany koa. Tsy maintsy miandry ela foana vao mahazo fiara karetsaka any Ürümqi rehefa ririnina. Nangatsiaka be izahay ary nony farany nisy fiara karetsaka nalalaka nijanona ihany, nisongona ity tovovavy ary nijanona teo anoloako. Hafahafa, hoy ny eritreritro, ary rehefa tafiditra tao anatiny aho dia nanontany ny mpamily fa naninona no tsy nijanona ho an'ilay tovovavy izy. Hoy ilay mpamily (Han): tsy mitondra an'ireny mpisatroka hoditra ireny izahay (Oigoro). Nanotany aho hoe fa maninona. Hoy izy hoe indray andro izay efa nitondra Oigoro aho izay nanome ahy vola sandoka, hany ka nanotany azy aho raha efa mba nisy mpanjifa Han efa nanome azy vola sandoka. Efa nisy hoy izy.
Raha toy izany no anaovanao ny Oigoro hoy aho, tsy manahy ve ianao fa hiharatsy kokoa ny adim-poko? Hoy ilay mpamily, tsy sahy izy ireo, manana fitaovam-piadiana izahay. Hany ka tsy nahita nolazaina intsony aho. Telo andro aho no tany, ary isaky ny mandeha fiarakaretsaka aho dia manontany foana raha manaiky ny mitondra mpandeha Oigoro ry zareo, ary mahazo valin-teny mitovy foana hoe: ratsy toetra ny Oigoro, tsy azo resena lahatra, tsy ijanona ho an-dry zareo izahay, etsetra. Efa fotoana ela taty aoriana aho vao nanotany Oigoro ary nahita fa misy fiarakaretsaka 6,000 any Ürümqi, ary satria efa zatra nolavina foana ny Oigoro dia tamin'ny farany izy ireo nanarama mpamily Oigoro 200, ary rehefa tsy ampy ireo, dia tsy dia misy n'inona n'inona azo atao loatra, noho izany, maro ny Oigoro nanomboka nanao ny fiarakaretsany tsy nahazo fahazoan-dàlana, indrindra ny fiara Xiali izay hitanao manamorona ny tetezan'i Erdao Bridge dia fiarakaretsaka piraty. Raha vao azoko an-tsaina kokoa ny tena fandehan-draharaha, dia nihevitra aho fa tsy maintsy misy zavatra hiseho na ho ela na ho haingana.
Fitiavana na fankahalàna amin'ny tsy antony, toy ny fitaratra. Ny fitondranao ny olona ihany no itondran'ny olona anao ihany koa. Raha tsy mihevitra ny vokatry ny zavatra ataonao ary ianao dia mametraka marika fotsiny ny vondrom-poko sasany, mahita ireo olona maro efa teo an-jatotaona maro niaina ny tsy rariny, ahoana no tsy hisy korontana ao Xinjiang?
Ary mba firy moa ny Han no tsy manavaka ny Oigoro?
Raha ny marina aza, amin'ny toerana maro ao Xinjiang, tsy vitan'ny manavakavaka ny OIgoro fotsiny ny Han fa manao azy ireo ho tsy olombelona mihitsy.
Raha tianao ny hitondrana anao ho toy ny olombelona, voalohany aloha ianao mila mitondra tena toa izany.
Misaotra noho ny fampielezan-kevitra tsara nataon'ny Antoko Foibe an-taonany maro, raha isika tato anatiny niharan'ny tsy rariny avy amin'ny Oigoro , ny hitan'ny masontsika aza tsy ninoantsika.
Toetra nampivaka ny Oigoro ny manao zavatra tsy am-piheverana. Nahazo fiandaniana kokoa avy amin'ny Antoko Foibe izy ireo, ohatra hoe ny fanaovana lohalaharana ny fitambaran'ny foko, izay manome tombony ho an'ny foko vitsy an'isa, etsetra., natao izay mba ho raha miha-tsy misy dikany ny zavatra ataony, miha mahazo tombony izy, ary avy eo izy ireo manjary manao zavatra tsy ampy fiheverana loatra.
Manantena aho fa ity vohikala ity dia tsy hanohy hampahafantatra sy tsy hamporisika isan'andro ny demonin'ny fankahalàna. Jereo fotsiny, firy amin'ny lahatsoratra eto amin'ity vohikala ity no manome vahana ho amin'ny fankahalàna.
Koa raha izany, ny tandrefana angaha moa tsy manavaka ny Sinoa sy ny Aziatika hafa? Fa raha mijery ny 100 taona lasa ianao, ny vokatry ny fandaozana ny foto-kevitra (Mbola tany kaominista ve i Sina), nitombo ve sa nihena ny karazana fanavakavahana toy izao? Raha mijery ny aina solon'ny aina tamin'ny 100 taona lasa mandrak'ankehitriny, nisy ve izao fiovana izao satria ny vahiny no nanazava ny saina hiala amin'ny fanavakavahana?the G2